Tsy fantatra izay avoakan’ny ampitso | NewsMada
Tsy fantatra izay avoakan’ny ampitso
Loza iray, loza roa… Tsy inona fa ny fihanaky ny valana­retina Covid-19 amin’ny faritra sasany indray. Miverina manao tampody fohy izany tato ho ato. Hanao ahoana? Mitady hahazo vahana ny fiparitahany, raha tsy tandremana sy sorohina malaky. Andiany fahatelo? Ilaina ny fanadiha­diana, famoahana sy filazana ny marina.
Aleo ifanatrehana isan’andro ho an’ny rehetra ny raha­raha. Mba tsy ho tompon-trano mihono amin’ny ankifo­nofono mamono vahoaka. Hatramin’izao, misy hatrany ny manao tandrevaka ny fahasalamany. Tsy vitan’izay, ilaina indrindra koa ny fijerena sy fampiharana izay fepetra hisorohana sy hiadiana amin’ny valanaretina.
Ny fisokafan’ny sisintanin’i Madagasikara ve no naha­tonga izao firongatry ny valanaretina tampotampoka izao? Tsy tongatonga ho azy, ohatra, ny fanapahan-kevitra hana­foana ny sidina avy atsy amin’ny Nosy Maorisy, manomboka y 27 novambra ho avy izao. Aleo misoroka toy izay mitsabo? Na efa mety misy aza ny tafiditra…
Na ny tsy fitandremana amin’ny fanajana manontolo sy amin’ny antsipiriany ireo fepetra sakana ara-pahasalamana tsy ahazoana ny tsimokaretina coronavirus no anton’izao? Hatramin’izao, tsy mety fomba fiainan’ny ankamaroan’ny olona ny fanaovana arovava, fanasan-tanana matetika, fanajana ny elanelana iray metatra…
Noheverina ho efa resy ny aretina? Na variana amin’ny hazakaza-davan’ny fiainana isan’andro vaky, tavela na tsy ahoana mbamin’ny fitandroana fahasalamana… Io manao tampody fohy io ny aretina. Tsy nampoizina? Na tsy fitandremana kely afitsoky ny olona vitsivitsy no mietraka loza lehibe ho an’ny maro na ny rehetra.
Na ahoana na ahoana, ny fahasalamana ihany no voalohan-karena fa lahitokana ny aina. Ny aina no enti-mihetsika, enti-mitady… Hampahatsiahivina indray ve fa ny fiarovan-tena aloha no azo atao, raha tsy hita maso ny fahavalo, tsy mifidy toerana na fotoana, tsy manavaka olona… ? Alao hery fa tsy fantatra izay avoakan’ny ampitso…